Proxy Sevrver IP ထည့်စရာမလိုဘဲ မြန်မာပြည်မှာ အခု အင်&#4112 — MYSTERY ZILLION
Proxy Sevrver IP ထည့်စရာမလိုဘဲ မြန်မာပြည်မှာ အခု အင်&#4112
May 2008 edited January 2009 in Tech News
မင်္ဂလာပါ MZ Member အပေါင်းတို့ ခင်ဗျာ။
အခု ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်မှာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ အင်တာနက်သုံးရာမှာ နဂိုလို Proxy IP ထည့်စရာမလိုဘဲ အင်တာနက်ကို သုံးလို့ရပါပြီ။
ဆိုလိုသည်မှာ နိုင်ငံခြားမှာကဲ့သို့ အင်တာနက်ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါပြီ်။ Direction Connection to the Internet ပါ။ အင်တာနက် သုံးဖို့ Internet Options ---> Proxy Setting မှာ ဘာမှ ဂဏန်းတွေ ထည့်စရာ မလိုတော့ပါဘူး ခင်ဗျာ။
အခု Proxy တစ်ခု ခု ( 203.81.71.111 ထားပါတော့ ) နဲ့ Website တွေကို ကြည့်ရင် ကိုယ်ကြည့်တဲ့ website ပေါ်မလာဘဲ http://www2.myantel.net.mm ကိုပဲ redirect ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီနေ့ မေလ ၂၉ ရက် ( ကြာသပတေး ) နေ့ - နေ့ခင်း တစ်နာရီခန့်က စပြီး အဲဒီလိုဖြစ်နေတာပါ။
Bagan Cybertech ကို ဆက်သွယ်ကြည့်တော့ သူတို့အနေနဲ့ စမ်းသပ်ဆဲ ကာလဖြစ်ပြီး error အနည်းငယ် ရှိနိုင်ပါသေးတယ် လို့ပြောပါတယ်။ အဆင်ပြေရင်တော့ ဆက်လက်ပြီး သုံးစွဲသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။
Proxy Setting အသစ်အား မည်ကဲ့သို့ configure လုပ်ရမည်ကို အောက်ပါ နေရာတွင် ကြည့်ပါ။
proxy မသုံးလဲ နေးတာကနေးတာပဲ ဘန်းတာကဘန်းတာပဲ။ ဘန်းတာက မပြောလိုပါဘူး နေးတာကတော့ အရမ်း အမြင်ကတ်တယ်။
ဘန်းတာက မပြောလိုပါဘူး နေးတာကတော့ အရမ်း အမြင်ကတ်တယ်။
:41: Right!! :41:
ban တာများလို့နှေးတာနေမှာ ဟိုတလောက youtube တွေဘာတွေပွင့်တုန်းကတော်တော်မြန်တယ်ဗျ
admin ကြီး မပြောကောင်းဘူးနော်...
ကျွန်တော်ကတော့ 203.81.72.200 ကိုပဲ အများသုံးတယ်..
Direct Proxy က သာမန်internet အတွက်သာ အဆင်ပြေတယ်..
mpt ရဲ့ Proxy ကိုသာ မှီခိုနေလို့ကတော့ ဘာမှ ကောင်းကောင်းဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး၊
ကျွန်တော်က သီးခြား Proxy သုံးတယ်... mpt proxy Parent အဖြစ်ပဲ သုံးလို့ကောင်းတယ်..
download ဆွဲရင် အဆင်မပြေပါဘူး၊
မည်သို့မည်ပုံလုပ်ကြမည်နည်း။ အကုန်လုံးကို ပိတ်ထားသည်။ ကျော်မည်ဟု ဟန်ပြင်တော့ ထိုသို့ကျော်နိုင်သော Proxy Websites များကိုလည်း ပိတ်ထားသည်။
ကျွနု်ပ်မှာမူ Freedom ဟုခေါ်သော ယခင် မယားဟောင်းကြီးအား ပြန်လည်၍ အဆက်အသွယ် လုပ်ရပါတော့သည်။
သင်တို့သည်လည်း အဘယ်ကဲ့သို့ ကျော်ကြ၊ ခွကြပါသနည်း။:39:
ဘမ်းတာက ဘမ်းတာပဲ နှေးတာကလဲ နှေးနေတုန်းပဲ ...
ဘာမှ ထူး၀ုူး .. ဟီး .. ဒါလေးရှိလို့ သုံးနေရတာ သိပ်မပြောနဲ့
စိတ်ညစ်၀ို့ ဒေါင်းသွားအုန်းမယ် ..
:6:firefox သုံးသူများ ဒီ Add-ons လေးသုံးကြည့်ပါလား။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒါလေးနဲ့ ကြည့်နေတာ။
ကိုthitmin ရေ . . . . .
မိုက်တယ်ဗျ။ အကို့ Add-ons လေးက။ :1:သုံးရတာ အဆင်ပြေတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးအလားတူ Proxy Add-ons လေးတွေ ရှိသေးလားဗျ။ Firefox အတွက်လေ။
နောက်ပြီး IE ကျတော့ရော ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟင်။ Freedom မသုံးဘဲ တခြားနည်းလမ်းလေးတွေရှိအုံးမယ်ထင်တယ်။
thitmin wrote: »
ကျေးဇူးပါဗျာ။ အခု ကျွန်တော် စမ်းကြည့်လိုက်ပါ့မယ်။
proxy သတင်းတွေက အမျိုးမျိုးပါပဲ
နှေးသွားတယ်ဆိုတဲ့ အော်သံတွေက အများဆုံးပါပဲ
ယခင်သုံးစွဲထားတဲ့ ထိုင်းလိုင်း သုံးစွဲသူတွေကို
ယခု အိန္ဒိယာလိုင်းသို့ ပြောင်းသုံးအောင် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုလို့ပဲ ပြောကြားပါတယ်..
အင်း အိန္ဒိယာလိုင်းကတော့ ကြပ်သွားတာပေါ့
တရုတ်လိုင်းကလဲ ဘယ်သောအခါမှ ပြီးမလဲမသိပါဘူး
thitmin ပြောတာလေး စမ်းသုံးကြည့်တာ ကောင်းတယ်ဗျ ... မဆိုးဘူး
ကျွန်တော်က ဒိုင်းအပ်ဆိုတော့ နှေးနေတာလေးတစ်ခုဘဲရှိတယ် ၊ ကျန်တာ အဆင်ပြေပါတယ်:67:
ဆရာကီးတို့ရေ . . . . . .
ဒီမှာ တစ်ခုရပြီဗျို့။ ကျော်လို့၊ ခွလို့ရတဲ့ Proxy Website လေးတစ်ခုပါ။ မြန်ပါသည်။ ပေါ့ပါသည်။
တစ်ခုပါပဲ။ သူက https ပါ။ http://proxify.com ဆိုရင် banned ထားပါသည်။ အဲဒါဆိုရင် s ထည့်လိုက်ပါ။ gmail လိုပေါ့။ ရသွားပါမည်။
Tor ဆိုတဲ့ Software ရှိပါတယ်။ Privoxy ဆိုတဲ့ proxy software နဲ့သုံးရပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲ ဆိုတာတော့ Tor website မှာပဲ ရှိပါတယ်။
good တယ်ဗျာ . . .:67:
ကျွန်တော်စိတ်ထင်လို့လားမသိဘူး။ တော်တော်မြန်လာတယ်။ \_:D/
Opengun ပြောတဲ့ https://proxify.com ကသုံးရတာသိပ်အဆင်မပြေဘူးဗျ။
ကျော်လို့မရတဲ့ site တွေရှိပါသေးတယ်။
အစ်ကိုရေ Gpass ဆိုတဲ့ဆော့၀ဲလ်လေးသုံးကြည့်ပါ Ultra Surft ထက်မိုက်ပါတယ် your freedom ထက်အဆပေါင်းများစွာသာပါကြောင်းခင်ဗျား။
deep471 ပြောတဲ့ Gpass ခေါ် Global Pass ရဲ့ Download လင့်ပါ။
အံမခန်း မြန်မာလို Manual ရှိပါတယ်။
Gpass server list လေးလုပ်ကြပါဦးဗျ။
http://gpass1.com/download.phpအံမခန်း မြန်မာလို Manual ရှိပါတယ်။
မှ ရယူပါ။ စည်သူအောင်(MZ)
ကိုစည်သူခင်ဗျာ.. အရမ်းပဲ လုံး၀ လုံး၀ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ဗျာ..
proxy server လုပ်ဖို့သင့်မသင့် ကူညီပေးကြပါအုံး
လေးစားစွာဖြင့် ညီလေး ice
install လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ရှင်။ ဒီ အောက်မှာရေးထားတဲ့ Error တက်နေတယ်ရှင်.
software installation လုပ်တဲ့အချိန်မှာလဲ ဒီစာလေးပေါ်ပါတယ်ရှင်။
Only install add-ons from authors whom you trust.
Malicious software can damage your computer or violate your privacy .
There isalink to download and setting information I was uploaded in rapidshare. There include detail information how to setup. Very easy to setup.
have u ever used the Freegate .
dome_kyi wrote: »
HOTE TOT HOTE TAL DAR BAL MAL LAL HOTE TAL KO dome kyi YAEE
I SAY YOUR DESCRIPITON PAR